CNaPS: Fanarenana ny fiahina ara-tsosialin’ireo Mpiasan’ny Kaomina | Région Boeny
Fanarenana ny fiahina ara-tsosialin’ireo Mpiasam-panjakana miasa eny anivon’ireo Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. Io no votoatin’ny fiofanana nataon’ny CNaPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) foibe niaraka tamin’ireo mpanapa-kevitra eny anivon’ny kaomina 46 misy ato anatin’ny faritra Boeny ny 27 sy 28 aprily 2017 tao amin’ny trano fivoriana Bloc Administratif Ampisikina, Mahajanga.
Ireo Ben’ny tànana sy Filohan’ny Filankevitra monisipaly manerana ny faritra Boeny no nasaina nandray anjara tamin’izao fiofanana izao.
Ny anton’ny nanosika ny CNaPS nanolotra izao fiofanana izao, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra dia ny fahatsapan’ny CNaPS fa mikorosy fahana ireo mpiasa eny anivon’ny Kaomina na am-perin’asa, na rehefa misotro ronono, noho ny tsy fisitrahan’izy ireo ny fiahina ara-tsosialy, satria sady tsy mpiasam-panjakana izy ireo no tsy mpiasan’ny tsy miankina.
Ny tena niompanan’ny fiofanana dia ny fanarenana ny fiahina ara-tsosialin’ireo mpiasan’ny Kaomina ireo ato anatin’ny faritra Boeny hoy ny Mpandrindram-paritry ny CNaPS, Rtoa Tsaboto Joselina. Nampahatsiahivina sy nampahafantarin’ireo mpiampiofana ny zon’ireo mpiasa ireo andaniny, sy ny adidin’ny kaomina amin’ny maha-mpampiasa azy, manoloana ireo mpiasa ankilany, ny CNaPS.
Taorian’izay dia niarahan’izy ireo nidinika tamin’ny mpizaika ny fomba handoavana ny latsakemboka tsy voaloan’ny Kaomina tany amin’ny CNaPS, hatrizay niasan’ny Kaomina sy ny mpiasa ao aminy, mba ahafahan’ireo mpiasa ireo mahazo fiahina ara-tsosialy mitovy amin’ireo mpiasam-panjakana sy ireo mpiasa eny amin’ny sehatra tsy miankina, izay samy fehezin’ny Lalànan’ny Asa.
Nambaran’ny Mpandrindram-paritry ny CNaPS, fa nialoha izao fiofanana izao dia nisy fanaovan-tsonia ny fifanekem-piara-miasa nifaneken’ny Ministry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ary ny Tale jeneralin’ny CNaPS.
Voarakitra ao anatin’io fifanekem-piara-miasa io, fa nifanaraka ny roa tonta ny hijery ny fomba hanarenana ny fiahina ara-tsosialin’ireo Mpiasam-panjakana miasa eny anivon’ireo Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana.
Tany Bongolava sy tany Menabe no nanombohana ny fiofanana, ary teto Boeny ny fahatelo. Ezahina ho vita amin’ity taona ity avokoa ny faritra 22 hoy ny tompon’andraikitry ny CNaPS.
Hanabe voho sy hampitombo ny fahaiza-manaon-tsika amin’ny fitantanana mangarahara ety anivon’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana izao fiofanana izao hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar tamin’ny fanokafana ny fomba ofisialy ny fiofanana.